China CNC Milling mveliso kunye nabenzi | Khokela
I-CNC Milling inezibonelelo ezininzi ngaphezulu kwezinye iinkqubo zokuvelisa. Ixabiso liyasebenza ngokubaleka okufutshane. Iimilo ezinobunzima kunye nokunyamezelana okuphezulu kunokwenzeka. Ukugqitywa kwe-Smooth kunokufezekiswa. I-CNC yokugaya inokuvelisa phantse nayiphi na imilo ye-2D okanye ye-3D ngaphandle kokuba izixhobo zokusika ezijikelezayo zinokufikelela kwizinto ezisuswe. Imizekelo yamalungu ibandakanya izinto zenjini, izixhobo zokubumba, iindlela ezintsonkothileyo, iindawo ezivalekileyo, njl.
Wokugaya amanani Computer (CNC) Wokugaya yinkqubo machining esetyenziswa ikakhulu Oyile neGesi Industries. I-CNC Milling isebenzisa isixhobo sokusika esijikelezayo esifana nokubhola, umahluko kukuba kukho umsiki ohamba ngamazembe ahlukeneyo enza iimilo ezininzi ezinokubandakanya imingxunya kunye nendawo zokubeka. Yindlela eqhelekileyo yeComputer Numerical Control Machining njengoko isenza imisebenzi yoomatshini bokugrumba nokujika. Yeyona ndlela ilula yokufumana ukubhola ngokuchanekileyo kuzo zonke iintlobo zezinto ezisemgangathweni ukuvelisa iimveliso zeshishini lakho.
Umahluko phakathi CNC Milling kunye CNC Ivula
I-CNC Milling kunye ne-CNC Turning vumela abasebenzisi ukuba benze iipateni kwaye bongeze iinkcukacha kwizinyithi ezingenakwenzeka ngesandla. I-CNC Milling isebenzisa imiyalelo, iikhowudi ezifakwe kwikhompyuter kwaye zisetelwe ukuqhuba. Indawo yokuguba emva koko iyaboba ize ijike ngamazembe ukusika izinto ukuya kubukhulu obufakwe kwikhompyuter. Inkqubo yekhompyuter ivumela oomatshini ukuba benze ukusika ngokuchanekileyo, abasebenzisi banakho ukubhala ngaphezulu ii-CNC Machines ukucothisa okanye ukukhawulezisa inkqubo.
Ngokwahlukileyo, i-CNC Turning isebenzisa oomatshini abalawulwa likhompyuter ukwenza imveliso eyahlukileyo yokugqibela. Inkqubo isebenzisa isixhobo sokusika esinenqaku elinye esifaka ngokuhambelana nezinto zokusika. Izinto eziphathekayo zijikelezwa ngokutshintsha kwesantya kunye nokusika isixhobo esijikelezayo ukwenza ukusikwa kwesilinda ngemilinganiselo ngqo. Isetyenziselwa ukwenza isetyhula okanye izabelo zeetyhubhu ezivela kwizinto ezinkulu. Yinkqubo ezenzekelayo kwaye isantya sinokuba luhlengahlengiso ngokuchaneka okukhulu kunokujika i-lathe ngesandla.
Dibana noomatshini bethu
Amaziko asibhozo e-Okuma MA-40HA Amachiza athe tyaba (HMC)
Amaziko amane eFadal 4020 athe nkqo (VMC)
enye ye-Okuman Genos M460-VE VMC ixhotyiswe ngeenkqubo zokususa i-chip kunye nezixhobo ezizitshintshayo
Dibana noBuchule bethu
Iimilo: Njengoko kufuneka njalo
Uluhlu lobungakanani: 2-1000mm ubukhulu
Material: Aluminium, intsimbi, Stainless, Titanium, Brass, njl
Ukunyamezelana: +/- 0.005mm
I-OEM / i-ODM yamkelwe.
Iisampulu ziyafumaneka ngaphambi kokuveliswa kobuninzi
Iinkonzo ezongezelelweyo: CNC Machining, Ukuguqula i-CNC, Metal Ukunyathela, Iphepha lesinyithi, Kugqityiwe, Izixhobo, njl
Egqithileyo Imizi-mveliso yesicelo
Okulandelayo: Ukuguqula i-CNC